फुटबल खेलाडी सबैभन्दा गम्भीर चोट लागेको प्राप्त
वर्तमान मा दिन, फुटबल संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो। यो लाखौं मानिसहरू द्वारा हेर्न र क्लबहरू हजारौं कप लागि प्रत्येक अन्य संग प्रतिस्पर्धा, यूरो को अरबौं प्रत्येक वर्ष उद्योग मा घुमाइएको छन्। यो फुटबल सबै दुनिया भर मानिसहरूलाई अविश्वसनीय खुशी ल्याउँछ भन्न सुरक्षित छ। तर, यो खेलाडीहरू आफूलाई तिनीहरूले क्षेत्रमा लिन सधैं खुसी छैनन् भनेर टिप्पण लायक छ। कि जीवनको - को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले पनि, खेल, तिनीहरूलाई फुटबल किनभने आनन्द। यसबाहेक, तिनीहरूले खेल र आफ्नो प्रभावकारिता सहभागी पैसा को अविश्वसनीय ठूलो ऐसे प्राप्त। तर यो जो उहाँले निकै ग्रस्त गर्न सक्छन् किनभने मिलान बेला खेलाडी, घाइते छ हुन्छ।
क्षति खुलारूपमा को डिग्री बदलिने को हुन सक्छ, र खेलाडी एक हप्ता वा एक वर्ष जस्तै छोड्न सक्नुहुन्छ। फुटबल मा चोट लाग्न - यो अपरिहार्य कुरा हो, यो विरलै शत्रु छ जानाजानी प्लेयर चोट लाग्नु गर्न प्रयास। अक्सर यो गल्ति हुन्छ, तर परिणाम कहिलेकाहीं भयावह हुन्छन्। यस लेखमा तपाईंले फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर चोट सिक्न छौँ। यहाँ साँच्चै भयानक देख्यो, र लामो र कठिन ठीक गर्न खेलाडीहरू त जो देखि जो, वर्णन गरिनेछ क्षतिग्रस्त छन्।
फुटबल मा चोट लाग्न धेरै फरक छन्, तर दर्शक को सबै भन्दा सबै कार्य एक फुटबल खेलाडी को शरीर भित्र ठाउँ लिन्छ किनभने, गल्ती भयो ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ। मर्काइ वा मांसपेशी टियर, tendons गर्न क्षति, पनि भङ्ग - सबै सहज छेउमा देखि। तर, 1981 मा, "बोरशिया" Mönchengladbach, त्यसपछि कुरा गर्ने फुटबल Ewald Lienen, सबै कुरा देखे एउटा चोट प्राप्त गरेको छ। खुट्टा लगभग तीस सेन्टिमिटर को खुला रक्तस्राव घाउ छ भनेर प्रतिद्वन्द्वीको खुट्टा उहाँलाई संचालित छ भन्ने तथ्यलाई जूता spiked। दृष्टि तर्साउने थियो, तर यो ध्यान छैन प्लेयर, उहाँले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो खेलाडीहरू थप लगभग खेल्न निर्देशन भन्ने तथ्यलाई आफ्नो dissatisfaction व्यक्त गर्न शत्रु कोच सीधा भयो। फलस्वरूप, घाउ बीस भन्दा बढी जोइन्टहरूमा लागि लगाएको थियो - भाग्यवस, यो छैन प्लेयर को स्वास्थ्य गम्भीर परिणाम र सबैभन्दा डरलाग्दो यसलाई मा उपस्थिति थियो। तथापि, फुटबल मा सबै चोटहरु साथै खर्च।
उदाहरणका लागि, फुटबल केही भयानक चोट लागेको पनि coma सक्छ - यो फ्रान्स टोली को Battiston जर्मन राष्ट्रिय टीम को गोल रक्षक एक एक जाँदा, 1982 मा विश्व कप मा भयो। दोस्रो पछि एक विशाल कर्नेलससुमाकर टाउको उहाँलाई मारा - पैट्रिक गेट प्रहार गर्दा उहाँले लक्षित छुटेका मात्र देख्न सक्थे। Battiston चेतना हराएको र coma फसे। उहाँले केही समय पछि उठेँ, त्यो संग निदान थियो को ग्रीवा vertebrae एक भंग र जबड़े, साथै दाँत को एक ठूलो संख्या को हानि। खुसीको कुरा, फ्रान्सेली टोली युरोपेली च्याम्पियनशिप जीत गर्न सक्षम थियो संग पैट्रिक 1984 मा छ महिना मा पुन: प्राप्त गर्न, र त्यसपछि सक्षम थियो। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, फुटबल सबैभन्दा भयानक चोट लागेको सधैं आँसु मा, फुटबल एक coma मा पनि अन्त गर्दैन।
तर, दुर्भाग्य, त्यहाँ अवस्थामा जहाँ अत्यन्तै दुःखी अन्त खेलाडीहरू यस्तो चोट लागेको हो। फुटबल - यो छ एकदम खतरनाक खेल, त्यहाँ उहाँले यो सबै मेरो जीवन पछुताउनु थियो भनेर प्लेयर आफूलाई चोट धेरै अक्सर उत्पादन क्षति, र एक महान खतरा छ किनभने - त्यो जारी गर्न सक्षम भने। जोस मारिन, "मैलेंगा" को गोल रक्षक यो मौका को deprived थियो। 1986 मा, उहाँले निस्कनुहोस् मा प्ले गर्दा, यो शत्रु आक्रमणकारीहरूले एक मतभेद थियो "Celta" र, विरुद्ध खेलमा गेट उभिरहेका थिए। पतन र तत्काल चेतना गुमाए। मारिन तुरुन्तै जहाँ एक प्रमुख सञ्चालन उहाँलाई गरेको थियो अस्पताल, लगियो, तर यो मदत थिएन - सप्ताह को एक जोडी मा, जोस चेतना पुन: प्राप्त बिना मृत्यु भयो। फुटबल मा भयानक चोट लागेको - यो अपरिहार्य छ, त्यसैले यसलाई त्यहाँ सकेसम्म सानो हुनेछ आशा छ।
माथि उल्लेख रूप मा, क्षति केही बाह्य छैन देख्न सकिन्छ, तर फुटबल मा cruelest घाइते स्पष्ट भन्दा साधारण बढी हो। उदाहरणका लागि, 1993 मा मस्को यूरी Tishkov को रूसी कप स्ट्राइकर "डायनेमो" मा गम्भीर म अविश्वसनीय अशिष्ट खेलेका एक रक्षक, को खुट्टा पायो। तर स्थिति जवान स्ट्राइकर संग समाप्त एक mistimed चुनौती कारण सही आफ्नो खुट्टा बाहिर तिबिया मा एक उल्लङ्घन शरीरका बाहिर टाँसिएको भन्ने तथ्यलाई गर्न दुखाइ आघात को एक राज्य थियो किनभने नियन्त्रण बाहिर मिल्यो। Tishkov इटालियन लिग सार्न तयार भएको थियो, उहाँले रूस मा सबै भन्दा होनहार Strikers थियो, तर यो चोट पूर्ण आफ्नो क्यारियर negated छ। उहाँले बरामद गर्दा सकिनँ नै स्तरमा खेल्न। फुटबल सपनाहरू सबैभन्दा भयानक चोट लागेको कसरी मात्र तिनीहरूले हेर्न तर पनि परिणाम हो बाटो।
दाऊदले Busst को मामला सबैभन्दा अंग्रेजी फुटबल को इतिहास मा निम्न स्तरका एक हुन्छन् र Tishkov संग अघिल्लो मामला भन्दा पनि खराब थियो छ। साँच्चै, घोडा बल लागि संघर्ष समयमा, एक कुनामा लात Basst शत्रु को दुई रक्षक संग तुरुन्तै सामना संग, सेवा उहाँले आफ्नो खुट्टा को धेरै भंग प्राप्त जो फलस्वरूप। एक नराम्ररी तिनीहरूले धेरै हड्डी protruded जो खुट्टा को Lay खेलाडी मा, छ, र लन वरिपरि सबै रगत ढाकिएको थियो, खुला थिए। Tishkov संग मामला छ रूपमा, Basst आफ्नो चोट देखि बरामद, तर अघिल्लो स्तर कहिल्यै आउनेछ।
2000 मा, 33 वर्षीया बेल्जियम Nilis धेरै जटिल गोडा चोट, एक डबल भंग समावेश जो पायो। गोडा - एक खेलाडी लागि सबैभन्दा खतरनाक ठाउँ हो, र पुरानो खेलाडीहरू लागि यो आघात एक वास्तविक भएका छन्। उहाँले ठूलो आकारमा थियो किनभने उहाँले क्षेत्र फर्कन असमर्थ थियो, त्यसैले एक पेशेवर क्यारियर को पूरा घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो, तर एकदम केहि समय को लागि खेल्न तयार थियो।
अर्को घातक मामला को युक्रेनी गोल रक्षक साथ 2001 मा भयो Sergeem Perhunom, जो एक रक्षक संग collided र पनि खेल जारी राख्न सक्षम देखिन्छ। तर उहाँले चाँडै, चेतना हराएको एक coma फसे र यो राज्य को बाहिर प्राप्त गर्न असमर्थ थियो। उहाँले एक महिना भन्दा कम मृत्यु भयो।
Cisse आफ्नो समय को सबै भन्दा उल्लेखनीय कालो खेलाडीहरू थियो, तर चोट पनि सबै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो छल्नु थिएन। चीन राष्ट्रिय टोली विरुद्ध मैत्री खेलमा त्यहाँ भयानक हुँदा आक्रमण गर्न आफ्नो flank मा फ्रांसीसी भङ्ग - शत्रु खेलाडी गल्ति भएको समर्थन खुट्टा Jibril मा दुर्घटनाग्रस्त भयो। पहिले नै यो बाहिर देख्यो बाटो मा, यो सम्भव सबै खराब छ भनेर बुझ्न थियो - एक अस्वाभाविक कोण मा खुट्टा arched र स्ट्राइकर को लन देखि प्राप्त गर्न सकेनौं। सोही, यो चोट हुन सक्छ, तर राम्रो कारण - घटनाको दुई वर्ष Cisse एक भयानक चोट पायो भन्ने तथ्यलाई। त्यो परिसंचरण भङ्ग गर्दा उहाँले एक भाँचिएको खुट्टा हड्डी थियो, र Jibril अंगच्छेद धम्की। खुसीको कुरा, डाक्टर खुट्टा फुटबल खेलाडी बचत गर्न सक्षम थिए, र उहाँले आफ्नो क्यारियर जारी हुनेछ।
फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा वफादार खेलाडीहरू चाँडै मनाउन हुनेछ चालीस वर्ष - र यो अझै पनि खडा अठार मा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरु जो "रोम", को लागि। तर 2006 मा, आफ्नो क्यारियर बन्द, उहाँले एक भयानक चोट पायो "Empoli" संग खेलमा रूपमा तोड्न सकेन - एक अस्वाभाविक कोण मा खेलाडी झुकेको रोक्न। छिटो र कुशल सञ्चालन मात्र totti मात्र होइन आफ्नो क्यारियर समाप्त, बरु चाँडै, ठीक यो जीत इटालियनहरू मदत गर्न 2006 विश्व कप जाने मदत गरे। दस वर्ष को लागि चोट को क्षण देखि पारित गरेको छ, तर खुट्टा घाइते अझै अक्सर आफूलाई सम्झाउँछ गर्दा फ्रान्सिस्को। तथापि, उहाँले आफ्नो क्लब लागि खेल्न जारी छ र अझै पनि प्रतिस्थापन गर्न मिल्ने अन्त अघि दस मिनेट छोडेर, विचित्रताहरू फुटबल काम गर्दछ हार बाट टोली सुरक्षित गरियो।
पछिल्लो दशक भन्दा खराब चोट प्लेयर "शस्त्रागार" एडुआर्डो सिल्वा देखिन्छ। उहाँले 2008, को "Gunners" "बर्मिंघम" संग भेट्दा मा पायो। त्यसपछि एडुआर्डो शत्रु धेरै कुनै न कुनै र फोहोर, को उपश्रेणी मा उहाँको विरुद्धमा प्ले सही तिघ्रा मा पूर्ण शक्ति दुर्घटनाग्रस्त छ भनेर थाहा थिएन। स्नायु मान्छे राम्रो यो प्रसङ्ग हेर्न छैन अमरीकी साँच्चै डरलाग्दो सपना थियो किनभने। दर्शक चोट लाग्नु छैन ताकि, म्याच प्रसारण त्यसपछि, हामी एपिसोड दोहोरिन चल्दैन गर्नुभयो धेरै च्यानलहरू - पूर्ण लिम्प प्लेयर खुट्टा देखि अलग झुन्डिएको रोक्नुहोस्। Folivshemu रातो कार्ड खेलाडी देखाइएको थियो, तर यो मदत गर्दैन एडुआर्डो - उहाँले धेरै लामो समय को लागि बाहिर थियो। म तुरुन्त अपेक्षित असफल अघिल्लो स्तर फर्कन, केवल एक वर्ष फेरि खेले, तर।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, भयानक फुटबल घाइते धेरै कारण ती हुन् - पनि फुटबल खेलाडी भविष्य क्यारियर मा एक धेरै गम्भीर प्रभाव तिनीहरूले HORRIBLY नेत्रहीन हेर्न मात्र छैन, तर। यो सूचीमा मात्र केही खेलाडीहरू पेसा पछि लाग्न व्यवस्थित र लगभग कुनै एक नै स्तर मा खेल्न सुरु गर्न सक्षम थियो।
एक सानो-ज्ञात कोच Claudio Ranieri र सेरी ए प्रसिद्ध footballers बारेमा अचम्मको तथ्य इतिहास: इटालियन फुटबल बारेमा रोचक
फैशन फिरोजा रंग को उचाइ मा! के जान्छ?
के भने भविष्यमा आमा Madden सुझाव? कसरी शान्तपूर्वक को रूसीहरूले प्रतिक्रिया सिक्न?
Kyrylivka Azov सागर: बाँकी। Kirillovka, Fedotova थुक्नु - मनोरञ्जन केन्द्र
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के हो?
पुरानो cholecystitis। लक्षण र उपचार
Communicators आईफोन 5s र 6: तुलना र विशेष गरी
आफ्नो हातले gabions कसरी बनाउने? विस्तृत विवरण
कसरी तयार सलाद "खेलाची"?
कस्मेटिक्स Joyskin: समीक्षा, वर्णन, मूल्यांकन
"रियो-रियो" रेस्टुरेन्ट: वर्णन, मेनु, समीक्षा
Wechsler बच्चाहरु र वयस्क लागि परीक्षण: को व्याख्या। Wechsler वयस्क खुफिया स्केल: बच्चाहरु संस्करण (प्रिस्कूल लागि)